Vaovao - Ny tolakandron'ny 16 martsa 2020, tonga tao Nanchang maikere Medical Equipment Co., Ltd. ny mpitarika ny Minjian Qingshanhu.
Ny tolakandron'ny 16 martsa 2020, tonga tao Nanchang maikere Medical Equipment Co., Ltd. ireo mpitarika ny Minjian Qingshanhu mba hitsidika sy hahatakatra ny toe-javatra iain'ireo orinasa miverina miasa sy mamokatra aorian'ny valan'aretina Xinguan. Eo ambany fitarihan'i Chen Fenglei, mpitantana jeneralin'ny Nanchang maikel Medical Equipment Co., Ltd., ireo mpitarika ao Minjian Qingshanhu dia nizaha ny habaky ny biraon'ny orinasa ary nanolotra sy nampiseho ny sasany amin'ireo vokatra vaovaon'ny orinasa.
Vokatra vaovao noforonin'ny tarika ------- JD1700
Product modely ：JD1700 、 JD1700L
Sehatra fampiharana:Ity andiana vokatra ity dia manome hazavana eo an-toerana amin'ny dokotera mandritra ny fizahana sy ny fandidiana. Izy io dia mety amin'ny loharano maivana fanampiny ao amin'ny sampana hopitaly sy ny efitrano fandidiana.
Votoatin'ny vokatra: misy fitoeran-jiro, fonosana, famatsiana herinaratra, sns.
Ity vokatra ity dia mandray ny famatsian-jiro herinaratra malalaka sy loharano fahazavana 12 mahery. Ny takelaka fanaovan-jiro dia mandray fivorian'ny solomaso ho fanangonana hazavana. Ny jiro dia mitovy sy mamiratra.
Ity vokatra ity dia nampiharina nandritra ny famolavolana sy ny famokarana GB 9706.1-2007 "Fitaovana Elektronika Medikal-Fizarana 1: Fepetra ankapobeny ho fiarovana" ary "Fepetra takiana teknika momba ny jiro fanampiana amin'ny fandidiana".
1, famaritana herinaratra
Volavolan-tsofina ： 100-200V ~ 50 / 60Hz
Volavolan-tsolika: 12V / 2A ~ 2.5A
2, mari-pana loko: 4000 ~ 5000K
5, lanjan'ny net:
Tendrombohitra ： 5 ~ 7kg
Sandrin'ny jiro ： 2.8 ~ 4.0kg
Jiro mitazona ： 1.4 ~ 2.4kg
Mitsangana ： 2.8 ~ 3.8kg
6, 、、 type、、、、、、、、
Sary 1 fisehoana ankapobeny an'ny JD1700
Sary 2 fisehoan'ny JD1700L ankapobeny
1 joint Mihodina 2, mampifandray sandry 3 cover Saron-jiro 4 、 Fonenana jiro
5, bokotra fanaraha-maso 6 、 Switch switch
Kisary 3 sary sclemikan'ny mpitazona jiro
1. Rehefa afaka ny herinaratra, ny bokotra switch (5) na ny switch sensor (6) dia azo ampiasaina handrehitra ilay fitaovana ary manomboka miasa.
2. Ny famirapiratan'ny jiro dia azo ahitsy amin'ny alàlan'ny bokotra switch (5), na apetraho eo ambanin'ny switch switch (6) ny tananao.
Fotoana fandefasana: Mar-18-2021
Jiro nify, Jiro halogen ho an'ny mpandinika biokimika, Jiro mandeha amin'ny fandidiana, jiro fanadinana ny rindrina, Jiro fanadinana Halogen, Jiro fanadinana ara-pitsaboana,